HomeTURKEYGobolka Central Anatolia06 AnkaraShaqaalaha TCDD ayaa lagu xiray Ankara YHT Shilka Tijaabada Shilalka ee liidata
13 / 01 / 2020 06 Ankara, Gobolka Central Anatolia, tareenka, GUUD, Tareenka dhakhso ah, Headline, TURKEY
ankara yht oo lagu eedeeyay inuu dayacay
Dhageysiga, maxaabiista maxkamad la soo taagayo, shaqaalaha tareenka, gaar ahaan qalabka kuleyliyaha digniinta ee nidaamka kululeynta tareenka la'aanta tababarka ayaa liis gareeyay waxyaabaha la tuuray.
universalSida warku sheegayo; “In kasta oo aan lahayn nidaam saxiixitaan, haddana eedeysanayaashu waxay u soo baxeen markii ugu horreysay tijaabada masiibada ku dhacday sanad ka hor khadka tareenka Xawaaraha Sare oo la furay ka hor doorashooyinka 24-ka June. Shaqaalaha tareenka, oo maxkamad la soo taagay sidii maxbuus, waxay liis gareeyeen dayacaada ka dhashay guuldaraysiga nidaamka kululaynta tareenka, gaar ahaan calaamadaynta, tababbar la'aanta iyo maqnaanshaha calan ee buul ku yaal. Hogaamiyaasha dowlada iyo TCDD ee furay dariiqa aan dhameystirneyn ee showga siyaasadeed lama tijaabin.
Sanad ka hor Ankara, tareen xawaare sare ku socday ayaa isku dhacay tareenka haga, 9 qof ayaa dhimatay, 86 qof ayaa ku dhaawacantay tijaabada masiibada oo bilaabatay. Dhageysiga dhageysiga oo ka dhacay maxkamada 30-aad ee Assize Court ee Ankara, 15 eedeysaneyaal ah, 3 ka mid ah waxaa lagu xukumay olma kuwaas oo sababay dhimashada iyo dhaawaca in kabadan hal qof ”, waxaa lagu xukumay 10 sano. Ehelka dadkii ku naf waayey Faicada, kuwa dhaawacmay iyo fuliyayaashii gaadiidleyda United United Union ayaa buuxiyay qolka maxkamadda.
Maxbuusku wuxuu ka shakisan yahay sarkaalka hay'adda Cusmaan Yildirim, sarkaalka mooshinka Sinan Yavuz, maareeyaha taraafikada Emin Ercan Erbey iyo qabqabashada eedeysanayaashii YHT Ankara Kuxigeenka Maareeyaha Kuxigeenka Kadir Oguz, Kuxigeenka Maareeyaha Adeegga Gaadiidka Ergun Tuna, Maareeyaha Adeegga Taraafikada ee Yaanhaal Unal Sayiner, Maareeyaha YHT Ankara Duran Yaman, Maamulaha waaxda 'Recep Kutlay, waaxda taraafikada TCDD iyo Maareenta Saldhigga Mükerrem Aydoğdu, madaxa waaxda amniga iyo tayada ee TCDD Erol Tuna Aşkın, ayaa markii ugu horraysay horteeda ka hor timid garsooraha.
Sarkaalka Ururka Tareenka Osman Yildirim, ayaa lagu eedeeyay inuu sababay shilkaas sababta oo ah wuxuu iloobey beddelka maqaska u oggolaanaya tareennada inay galaan dariiqyo kala duwan, wuxuu yiri, Yıldırım waxaan u maleynayay inaan sameeyay laakiin ma aanan sameynin. Waxay ahayd shil maxaa yeelay tareenkii ku socday Line 2 wuxuu ka socday Line 1 ”.
NAN SHAQAALAHA MA UU KA SHAQAYNAYN INUU LAGA HELI KARO "
Hillaac muujinaya in maqasku barafoobay sababta oo ah nidaamka kuleyliyaha kama shaqeynayo maqaska, M74 wuxuu sheegay in maqasku uusan shaqeynin oo aan waligiis la tusin isaga. Ma aha in la shaqeeyo habeenkii wixii ka dambeeya 23.00:4 si loogu wareejiyo Yildirim, wuxuu sheegay in hawadu qabow tahay, kaligeed shaqeyneyso oo aan la tababarin, wuxuu yiri: "Ma aanan ogeyn inaan shaqeyn doono maalintaas oo keliya. Qiyaastii 5-12 saac, ayaa Eryaman'dan raadiyayaal digniinta maqaska maqaayada soo socota. Waxaan isku dayay inaan dhiso jidka 13-aad ee amarka sarkaalka howlgalka. Waxa uu lahaa baraf oo maqasku waa barafoobay. Nidaamyada kuleylku wuxuu ku yaal dheriga laakiin ma shaqeynin. Waxa dhib igu noqotay samaynta maqas. Sarkaalku wuxuu sheegay inuu jiray tareen 11-kii. Waan la macaamilay waanan sameeyay. Markan waxaan u aaday inaan sameeyo maqashii 4-aad oo gambis soo dhacay. Gacmahayga iyo cagahaygu barafoobay. Waxaan qabow ahaa ilaa 5-11. Ma i gadhsiin. Waxaan galay qolka. Waxaan sameeyay XNUMX-ka maqas. Tareenka ayaa iga hor maray laakiin ma awoodin inaan arko safkan. Ka dib shilkii waa dhacay wuuna argagaxay. ”
DIGNIIN LACAG AH ”
Yildirim, oo ka jawaabaya qareenkiisa Mehmet Eker su’aalaha, ayaa sheegay in aqalku aanu ku jirin meel uu ku arki karo maqaska M74, isla markaana aysan jirin calamado casaan iyo cagaar ah oo loo adeegsaday digniinta guryaha, ayuu yidhi. Markii qareenada cabashada ay weydiisteen nidaamka xakameynta bedelida maqaska si sax ah, Yildirim wuxuu carabka ku adkeeyay in nidaamka digniinta elektiroonigga uusan saxeexeynin, in kasta oo uusan calaamadda calaamadda aysan dhici doonin.
Sarkaalka dhaqdhaqaaqa ayaa xiray eedeysane Sinan Yavuz, wuxuu sheegay in loo xilsaaray soo-dejinta tareenka. Yavuz wuxuu sheegay inuu u diray tareenka sidii shaqadii ugu horeysay maalintii shilku dhacay wuxuuna yidhi sonra markaa waxaan sugayaa dammaanad ka timid Cusmaan Y Osmanldırım. Muddo ka dib, Yildirim ayaa ii yeedhay oo ii sheegay inaanu jirin wax dhawaaq ah oo quful ah oo ku saabsan maqaska M90. Waxaan u sheegay inuu gaabiyo tareenka soo socda. Waxaan ugu yeeray Yildirim taleefonka farsamada inta uu tareenka soo galay. Maqashuhuhu waxay yiraahdeen barafku wuu xayiran yahay mana jiraan wax dhibaatooyin ah maxaa yeelay wuu nadiifiyaa. ”
IZ MA JIRO XANUUN KHATAR AH ”
Kadib Yavuz wuxuu muujinayaa in tareenka haga la sheegay inuu u yimid Eryaman, raacay oggolaanshaha nidaamka wuxuuna u yeedhay injineerka kantaroolka taraafikada ee loo yaqaan tareenka 06.30, ayuu yidhi. Yavuz wuxuu tilmaamay in aysan jirin fursad lagu ogaan karo nidaamka signalada, sidaa darteed aysan suurta gal ahayn in la raaco, in la ogaado khadkan socda, ayuu yidhi.
Emin Ercan Erbay, oo ah la-taliyaha taraafikada ee la qabtay, wuxuu sharraxay in aysan suurta gal ahayn in la arko booska maqashiinka ee kursigiisa: “Nidaamka is-qoritaanka ayaa ku dhammaaday Sincan. Ma haysto nidaam muujinaya jihada tareenka saaran dashboardka. Haddii ay jiri lahaayeen, midkoodna maanta ma joogi laheyn halkaan.
Go'aanka ah in la sii daayo kiisaska Pamukkale Express waxaa ogolaaday Maxkamadda Sare
TCDD Jilicsan oo sababay geerida Ebru
Ankara YHT Markhaatiga Shilalka Sida Marqaatiyaal Ilaaliya
Dhibaatooyinka Gaadiidka ee Agababa Malatya
Kocaoglu oo lagu eedeeyay takoorid
TOPBAŞ mar kale kama qayb geli maadada Metrobus
Kiiska Shilka ee Ankara YHT inuu Bilaabo Janaayo 13
Ankara YHT Shilalka
Xirfadlayaal badan ayaa loo yaqaan Emin Erbey
Nidaamka kuleylka maqasyada
Xirfadlayaal badan ayaa loo yaqaan 'Osman Osman'
Nidaamka kululaynta tareenka
Si toos ah ula xiriir Sinan
La Xayiray Shaqaalaha TCDD
Shaqaalaha TCDD Tijaabada